छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु « MNTVONLINE.COM
काठमाडाैँ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अनियन्त्रित भएर एक ट्रयाक्टर सडकदेखि खस्दा चालकको मृत्यु भएको छ । ध १ त ४७१२ नम्बरको खाली ट्रयाक्टर मङ्गलबार राति १० बजे बागलुङ नगरपालिका–३ बोक्सेगैह्रामा सडकदेखि १५० मिटर तल खसेको थियो ।
एजेन्सी । जातीय विवादका कारण तनावग्रस्त बनेको सुडानको डार्फर क्षेत्रलाई मङ्गलबार शान्त पारिएको सुडान सरकारले जनाएको छ । करिब तीन दिन चलेको जातीय हिंसाका कारण
कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित तीन जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा !
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल !
सुनसरीमा माइक्रोबस दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, १० घाइते !